Alan Turing: onye ọ bụ, biography na feats na sayensị | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihu ndi nwoke n’akụkọ ihe mere eme akara akara tupu na mgbe na sayensị anyị na-ahụ Alan Turing. Ọ bụ onye Britain mgbakọ na mwepụ, ọkà mmụta sayensị kọmputa, ọkà ihe ọmụma ma ọ bụ usoro iwu ọkà mmụta sayensị, marathoner, logician na ultra-anya ọsọ nke imehie ma ọ bụ mee ọtụtụ ọganihu na sayensị n'oge ya. A mụrụ ya na 1912 wee nwụọ na 1954. A na-ewere ya dịka otu n'ime ndị Fada nke sayensị kọmputa na onye bu ụzọ nke usoro kọmputa nke oge a. N'ihi onyinye ha, enwere ike imetụta ọdịdị nke usoro dị iche iche algorithm na echiche mgbakọ, n'etiti nke anyị na-ahụ igwe Turing.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị akụkọ ndụ niile na uru nke Alan Turing.
1 Ihe omuma nke Alan Turing
2 Ọganihu na sayensị
3 Alan Turing na-agbasa koodu
4 Nzube nke artificial
Ihe omuma nke Alan Turing
Dika aturu anya, n’oge ochie enwere otutu ihe omuma banyere ala, nke mere na madu puru iche na ngalaba sayensi di iche iche. N'okwu a, anyị ahụla na onye sayensị a raara onwe ya nye n'ọtụtụ ngalaba sayensị, ya mere o nwere ike itinye aka n'akụkụ dị iche iche. E nyere Alan Turing iwu ka ọ duga ndị ozi ala ọzọ nwee ike ịkọwa ozi ndị Nazi ezoro ezo n'oge WWII. Site na nwata, o nyere ezigbo azịza nye nsogbu dị iche iche na mgbakọ na mwepụ wee nabata ya dị ka nwa akwụkwọ na King's College na Mahadum Cambridge, otu n'ime ụlọ akwụkwọ sayensị ama ama n'ụwa niile.
N'ime ulo akwukwo a obi ruru ya ala ma mata onwe ya na ndi mmadu ole na ole dika nwoke na nwoke. N'oge a nke a bụ ihe megidere iwu na Britain, ya mere ọtụtụ mmadụ enweghị ike ịma maka ya. N'oge ọkwa mahadum ya, nke mbụ, mụ na nwa akwụkwọ m na-eme ya dịka onye nkuzi, o metụtara ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ nke oge ya.
Na 1936, o bipụtara otu akụkọ si na mmalite nke usoro iwu usoro iwu. A ọ kọwapụtara ihe enwere ike ịgbakọ na nke anaghị agakọ. Nke ahụ bụ ịsị, na computable bụ ihe niile nwere ike idozi ihe algọridim. A kọwapụtara algorithm dị ka setịpụrụ ntuziaka nwere oke nke, site n'ọtụtụ usoro na-aga nke ọma, na-eduga na ngwọta nke nsogbu ahụ. Ndị ọzọ na-ezuteghị nkọwa a bụ ọrụ ndị na-enweghị ike ịgbakọ. O gosiputara na enwere nsogbu ndi n'enweghi azịza ya, ya bu, ha enweghi azịza algorithmic.
Iji nye echiche maka ihe a niile, ma nye igwe a ma ama nke na-ebu aha ya. Ọ bụ ngwaọrụ echepụtara nke nwere ike iji algorithm rụọ ọrụ mgbakọ na mwepụ ọ bụla. Ọ bụrụ na enwere ike ịhazi ya ma gbanwee ya, ọ ga-abụ kọmputa. O sina dị, Alan Turing agbasaghị ọrụ a, enweghị ike ịdabere na ụzọ ọrụ dị mkpa.
Ọganihu na sayensị
Ihe ọzọ Alan Turing nwere bụ ịkọ ọdịda nke taa na-emetụta kọmputa anyị. Tupu enwere kọmputa, ọkà mmụta sayensị a abụghị naanị na ha dabere na ọrụ ha, kamakwa kwukwara kwa ọdịda n'ọdịnihu. Nke a bụ otu, mgbe ọ na-echepụta akụrụngwa ya, ọ kọwapụtara nsogbu ịkwụsị, iji kwenye na ọ nweghị algorithm nke nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na ọrụ ga-ejedebe ma ọ bụ na ọ gaghị amalite.
N'ihi echiche ndị a, ọ na-ebu amụma na kọmputa ga-akpọnwụ ma gbanwee n'ọdịnihu. Nke ahụ bụ, mgbe kọmputa dabara na akaghị aka, anyị ga-edozi maka ịmalitegharị ya iji dozie nsogbu ahụ. A na-eche na enwere nsogbu ndị anaghị agbakọ, pma ọ bụ ya mere ọ dịghị algorithm nke nwere ike inye ngwọta ya.
Alan Turing na-agbasa koodu
Gọọmentị Britain kpọrọ Alan Turing na 1938 ka ọ duru ndị otu gaa na etiti obodo ya. Ọ bụ ya kpatara m nwere ozi bụ isi nke Camón ịkọwa ozi sitere na igwe Enigma. Igwe ndị a na-ahụ maka inwe ike izipu iwu nzuzo na ndị ụgbọ okpuru mmiri ndị Nazi na-arụ ọrụ na Atlantic Ocean.
Onyinye ndị otu dugara Turing ọ dị oke mkpa inwe ike ị nweta nsonaazụ nke agha ahụ maka ndị mmekọ. Ma ọ bụ na ha nwere ike nweta ya site na ịdị nkọ ha na imepụta igwe Bombe mbụ. Ndị a bụ ngwaọrụ electromechanical nke ewuru naanị iji nwee ike imebi koodu Enigma.
Mgbe nsogbu a nile gasịrị, eziokwu nke iwughachi igwe nke nwere ikike dịka ụbụrụ mmadụ welitere. Nke a bụ ihe arụmarụ a maara dị ka igwe nwere ụbụrụ. Ọ na-achọ ịmepụta kọmputa dijitalụ iji nwee ike idozi ihe karịrị otu nzube ma nwee ike ịchekwa mmemme na ebe nchekwa ya. Otu nnukwu nsogbu Alan Turing nwere n’oge ndụ ya bụ na ha nyere ya ọgwụ “gwọọ” mmekọ nwoke na nwoke ya. Ọ bụ onye ọka iwu nyere ọgwụ a ma ọ metụtara ahụike ya nke ukwuu.
N’afọ 1947, ọ nwere ike imepụta kọmpụta ọhụrụ nke gbadoro ụkwụ na kọmpụta nwere ike ịchekwa mmemme na ebe nchekwa ya, mana ọ nwere ikike karịa igwe bu ụzọ ụzọ.
Nzube nke artificial
N'oge ahụ, Alan nwere nnọọ mmasị na ọgụgụ isi. Nke ahụ bụ ịsị, Otú o si arụ ọrụ n'ụbụrụ ụbụrụ mmadụ na-atọ ya ụtọ. Onyinye kacha mma o nyere na mpaghara a bụ usoro iwu ọzọ. N'ọmụmụ ihe ha, ha guzobere ntọala dị iche iche nke ọgụgụ isi na-atụ aro ụdị ule iji chọpụta ma igwe ọ nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ na ọ bụghị.
Mgbe ihe mechara ya na onye hụrụ ya n'anya, E jidere Alan Turing maka idina ụdị onwe ya ma maa ya ikpe, ọ bụ ezie na onye ọka ikpe nyere ya oge ọhụụ maka mgbanwe ọgwụgwọ hormone ka ọ gwọọ. Ihe a nile mere na 1952. Ọgwụ a metụtara ahụike ya nke ukwuu wee mee ka ọ daa mbà n'obi nke e chere na ọ dugara ya igbu onwe ya. Ka i si hụ, unyi nke di na mbu abughi otu ihe di ugbu a ma onye sayensi a nwere ike inye onyinye karia nwoke idina nwoke.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Alan Turing na ọganihu ya na sayensị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Alan Turing